शिक्षा ऐन संशोधनको विरोध गर्ने माननीय सांसदहरुलाई खुला पत्र | Educationpati.com
शिक्षा ऐन संशोधनको विरोध गर्ने माननीय सांसदहरुलाई खुला पत्र
२०७४ असोज ६ गते ११:३१मा प्रकाशित
शान्तिउदय मावि, भरतपोखरी, कास्की
२०७४ आश्विन ३ गते संसद बैठकमा शिक्षा ऐन नवौं संशोधन माथि छलफलको क्रममा तपार्इंहरुले भाग लिँदै दिनु भएको अभिव्यक्ति प्रति आश्चर्य लागि यो खुला पत्र लेख्दै छु ।
माननीय सांसद गगन कुमार थापा ज्यू,
संसदमा भाग लिँदै तपाईले ८२ प्रतिशत सरकारी विद्यालय र १८ प्रतिशत निजी विद्यालयमा विद्यार्थी पढ्छन् र १८ प्रतिशतका अभिभावक हामी सांसदहरुले ८२ प्रतिशत ति अवोध विद्यार्थीको भविश्य खेलवाड हुने गरि अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने विधेयक पास गर्नुहुँदैन हामीमा त्यो अधिकार छैन भन्नुभयो ।
हो, त्यही भएर पो राम्रो सार्वजनिक शिक्षा निति नबनाउनु भएको रहेछ, शिक्षक नियुक्तिको व्यवस्था संवैधानिक अंगबाट गर्ने व्यवस्था पनि नबनेको त्यही भएर रहेछ, शिक्षामा सरकारी बजेट बर्षेनी घट्दै गईराखेको पनि त्यही भएर पो रहेछ, सार्वजनिक विद्यालयहरुमा दलहरुको राजनीतिक हस्तक्षेपको नाङ्गो नाँच चलिराखेको र राम्रो काम गर्ने शिक्षक भन्दा पार्टीको पिछलग्गु भएर हिड्ने शिक्षकलाई पुरष्कृत गरिरहनु भएको पनि त्यही भएर पो रहेछ ।
वरिष्ठ शिक्षक भन्दा कनिष्ठ शिक्षकलाई प्रद्यानाध्यापक बनाई विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने नीति बनाउनुको कारण र ८२ प्रतिशत विद्यार्थीको भविश्य माथि खेलबाड त १८ प्रतिशत विद्यार्थीको नेतृत्व भएर पो रहेछ ।
हामीलाई त संसदले सबै वर्ग, जाति, समुदाय, पेशाकर्मी, गरिब सबैको हित अनुकुलको ऐन नियम बनाउँछ भन्ने लागेको थियो । तपार्इं त ८२ प्रतिशत विद्यार्थीको भविश्य निर्धारण गर्ने ऐन बनाउन पाईदैन पो भन्नु हुँदो रहेछ । तपाईंले ति कर्णालीलगायत दूरदराजका गरिब बिपन्न जनताको हितको ऐन नबनाउनुको कारण संसदमा तिनको प्रतिनिधित्व नभएर १८ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व भएर पो रहेछ । अस्थायी शिक्षकलाई ठूलो अन्याय भएको छ । उनीहरुलाई अहिले दिने भनेको सुविधामा बरु ५ गुणा दिँदा पनि हुन्छ तर पढाउँन दिन हुँदैन भन्नु भयो । माननीय ज्यू अस्थायी शिक्षकलाई अपहेलित गरेर त योग्य छैनस् भनी निकाली त्यो ५ गुणा सुविधा होइन २–४ अर्व रुपैयाँ दिएपनि मन सन्तुष्ट हुँदैन ।
अपमानलाई पैसासँग तुलना गर्न मिल्दैन । हामीले अशोभनीय सुविधा मागेको होइनौं स्थायी शिक्षक सरह मात्र मागेको हौं । योग्य शिक्षकबाट पढ्न पाउने अधिकार हुनुपर्छ भन्नु भयो । अस्थायी शिक्षक कसरी अयोग्य भए ? ति सबै तपाईंहरुले बनाएको कानूनी प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका हुन । अस्थायी शिक्षकले विश्व विद्यालयबाट शैक्षिक प्रमाण पत्र चोरेर ल्याएका हुन् र ?
७ लाख शिक्षण अधिकार पत्र लिएर बसेका व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने तिनलाई अन्याय भयो भन्नुभयो । हो उनीहरुलाई अन्याय भएको छ तर उनीहरुले आफु नजन्मदैँ रिक्त भएको हजुरवाको दरबन्दीमा हजुरबा सँग प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने कहाँको न्याय हो त ?
माननिय ज्यू, उनीहरुले त नयाँ सिर्जना भएका दरबन्दीमा पो प्रतिस्पर्धा गर्ने हो तपाईंका यस्ता केही अभिव्यक्ति छन् जसले तपाईंको उचाई घटाएको छ । ३५,३६ वर्ष अस्थायी रहेर पढाएको शिक्षकको विरोध गर्नु उहाँहरुको न्याय माथि अवरोध गर्न खोज्नु तर ०६३ मा प्रतिनिधि सभाले अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने विधेयक पास गर्दा तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले संसदको सर्वोच्चता को हनन् हुने गरि प्रमाणीकरणको नाममा काटी दिदाँ तपार्इं बोल्न नसक्नु, प्रजातन्त्रको हत्या हुँदा, २०५ सांसदको अपमान हुँदा मौन बस्नु तपाईं कुन न्याय खोजिरहनु भएको छ ।
प्रहरीले गुण्डा नाइके भनिएका घैटेँलाई इन्काउन्टर गर्दा संसदमा आवाज बुलन्द पार्ने तपाई कास्की कांग्रेस नेता रामजी पौडेल बादलको हत्यामा मौन बस्नु कुन न्याय खोजिरहनुभएको छ ?
माननीय सांसद रविन्द्र अधिकारी ज्यू,
संसदमा भाग लिँदै शुरुमै धेरै दुःख लागेको छ भन्नुभयो । अस्थायी शिक्षकले थोरै न्याय पाउँदा तपाइलाई दुःख किन लाग्छ ? के अस्थायी शिक्षकले यो मुलुकमा न्याय पाउँनु हुँदैन ?
यो मुलुक अस्थायी शिक्षकको होइन ? अस्थायी शिक्षक स्थायी हुँदा सार्वजानिक शिक्षा मृत्यु शैयामा पुग्छ भन्नु भयो कसरी ? शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया संवैधानिक अङ्ग वा लोक सेवा आयोगबाट हुने बनाउन किन पहल गर्नुभएन ? पटक–पटक अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने स्थायी गर्ने यहि मात्र काम हो संसदको भन्नुभयो । यस्तो प्रक्रिया बनाउने अस्थायी शिक्षक हो ?
अस्थायी नै भएर ४० बर्ष सम्म पढाउँदा तपाईं चुप रहने स्थायी गर्दा सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त हुन्छ भन्ने ?। ४० औं वर्ष सम्म अस्थायी नै भएर पढाउदा फेरी ध्वस्त नहुँने किन ? लाखौं विद्यार्थीको पक्षमा बोल्ने की जागिर खाई रहने बनाउनेको पक्षमा बोल्ने भन्नुभयो । लाखौं विद्यार्थीको पक्षमा आजसम्म किन चुप रहनुभयो, राम्रो डिभिजन ल्याउने विद्यार्थी शिक्षण पेशामा आकार्षित गर्न संसदले के त्यस्ता ऐन ल्यायो ? वा ल्याउनको लागि तपाईंले पहल गर्नुभयो ?
सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्कनुमा सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत करिव दुई लाख शिक्षकमा २६ हजार अस्थायी शिक्षक मात्र दोषी देख्नुभयो ? संविधान निर्माणमा अस्थायी शिक्षकले शिक्षक नियुक्ति गर्न संवैधानिक अंग बनाउनु पर्छ भन्यौं । तर, तपार्इंले उही सरकारको नियन्त्रणको शिक्षक सेवा आयोग राखि राख्नुभयो यसरी हुन्छ, लाखौं विद्यार्थीको पक्षमा ?
सरकारको ऐन नियमको परिधीमा नियुक्त अस्थायी शिक्षकलाई अयोग्य भन्ने तपार्इंलाई कस्ले दियो अधिकार ? के अस्थायी शिक्षकमा विश्वविद्यालयवाट अनुत्तिर्ण भएकालाई नियुक्त गरिएको हो ? तपाईले मुलुकभरका अस्थायी शिक्षकको अपमान गर्नुभएको छ ।
तपाईं दश कक्षामा पढ्दै गर्दा अस्थायी शिक्षकमा नियुक्त भएका शिक्षक, तपाईं पढेको स्कुलमा आज सम्म पनि ३३/३४ वर्ष सेवा गरी अस्थायी नै हुनुहुन्छ तपाईकै बुबा लामो समय अध्यापन गराएर अस्थायी शिक्षकबाटै बिस्थापित हुनुभयो ? के उहाँले यो राज्यबाट न्याय पाउनु पर्दैन ? यो पत्र लेखक पनि तपाई पढेकै स्कुलमा २२ बर्ष देखि अस्थायी शिक्षक भएर नै अध्यापन गरिराखेको छ ।
४० बर्ष अस्थायीले पढाउँदा सार्वजनिक शिक्षा नबिग्रने स्थायी गर्दा मात्र बिग्रने । १० वर्षसम्म शिक्षक हटाउन नपाउने गरि ऐन ल्याउन खोजियो स्थानीय निकायले के हेरेर बस्ने भन्नुभयो । स्थानीय निकायलाई शिक्षक निकाल्ने अधिकार दिईएको हो की मा.वि. सम्मको शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्न दिईएको हो ?
अहिले पनि बिना कारण शिक्षक निकाल्ने अधिकार केन्द्र सरकारलाई कहाँ थियो र शिक्षक निकाल्दैमा सबै समस्या समाधान हुन्छन् ? राजनीतिबाट आउने स्थानिय निकायले शिक्षक निकाल्न पाउनुपर्छ भन्न खोज्नु भएको हो ? कास्केली जनताको आशाको केन्द्र तपार्इं यस्ता गतिविधि गर्दै जानुभयो भने कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी पछारिनु होला, जसरी यहाँका केही नेता उठ्नै नसक्ने गरी पछारिए ।
माननीय सांसद राधेश्याम अधिकारी ज्यू,
पछाडीको ढोकाबाट छिरेका ३० हजार अस्थायी शिक्षकलाई एकदम अन्याय भयो भन्दै गर्दा अर्कातिर ७ लाख लाइसेन्स लिएर बसेकाले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाएर छटपटाई रहेका छन् उनीहरुलाई कुनै संवेदना छैन ? यो कस्तो न्याय हो ? यो हाउसले उनीहरुको बारेमा सोच्ने की नसोच्ने भन्नुभयो । यो पछाडीको ढोका भनेको के हो ? के भन्न खोज्नुभएको हो ?
शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियाका कानून बनाउने तपार्इंहरुनै हो, अस्थायी शिक्षक हो र ? यस्तो पछाडीको ढोकाबाट छिर्ने प्रक्रिया किन बनाउनु भएको ? कुन ढोका राम्रो हुन्छ त्यही बनाउनुहोस् न । आफुहरुले बनाएको ढोकाको आफैले आलोचना गर्ने ? तपाईं पनि पछाडीकै ढोकाबाट बाटै सांसद हुनुभएको हो र ? हामीलाई त त्यस्तो लाग्दैन । तपाई पनि कानूनी प्रकृया अनुसार नै सांसद हुनुभएको हो, हामी पनि कानूनी प्रकृया अनुसार नै अस्थायी शिक्षक भएका हौं । शुन्य नतिजा सार्वजनिक विद्यालयको छ र त्यहि नतिजा ल्याउने अस्थायी शिक्षकलाई जसरी पनि पास गराउने, टिकाउने भविश्यका सारा सन्ततिको भविश्य खेर फाल्ने भन्नुभयो । शुन्य नतिजा अधिकांश विद्यालयमा आएको पनि छैन ।
डाटालाई यसरी अफवाह वा भ्रम फैलाउन हुँदैन कुनैमा १०० प्रतिशत छ, कुनैमा ५० प्रतिशत, कुनैमा २० प्रतिशत भन्दा तल छ । औसतमा ४०/४५ प्रतिशत उपलब्धि सरकारी विद्यालयको छ । विद्यालयमा अस्थायी शिक्षक मात्र छैनन् र अस्थायीले गर्दा मात्रै नतिजा आउने होईन । बोर्डिङ स्कुलका शिक्षक भन्दा सरकारी स्कुलका शिक्षकको योग्यता प्रायः बढि छ, तालिम प्राप्त छन् तर नतिजा बोर्डिङको किन राम्रो आउछ ? शिक्षक अयोग्य भएर त होईन रहेछ , व्यवस्थापन नीति कार्ययोजना रहेछ त, यो फेरी तपाईंहरुले बनाउने हो ।
माननीय सांसद जनकराज जोशी ज्यू,
अस्थायी शिक्षकलाई यसरी छिराउँदा अन्य क्षेत्रका अस्थायी कर्मचारी पनि यसरी नै छिर्छन भन्नुभयो, अस्थायी नै नरहने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने होईन र ? एउटै काम कसैले स्थायी भएर गर्ने कसैले अस्थायी भएर गर्ने गर्दा सेवा सुविधामा अन्याय हुने भएकाले संविधान विपरित हुन जान्छ । संविधानमा उल्लेख भएको समान कामका लागि समान ज्यालालाई कि हटाउनु प¥यो कि समान गर्नुप¥यो माननीय ज्यू,
अस्थायी शिक्षकलाई डबल बेनिफिट किन दिनुप¥यो भन्नुभयो कहाँ छ डबल बेनिफिट, तपार्इंको नजर डबल बेनिफिट हो । सेवामा रहेकोले परीक्षामा सहभागि हुन पाउँने लोक सेवा आयोगमा पनि छ त्यही अनुसार परीक्षामा सहभागि हुने हो । सेवा गरेको वर्षको आधारमा उपदान पाउने हो त्यो कर्मचारीमा पनि छ, कसरी डबल बेनिफिट देख्नुभयो ।
कनिकुथि ४० प्रतिशत अंक ल्याउनेले पढाएर कस्तो शिक्षाको बिकास होला भन्नुभयो ? तपाईं ऐन बनाउने ठाँउमा हुनुहुन्छ, विश्व विद्यालयबाट ८० प्रतिशत भन्दा माथि अंक ल्याउने र शिक्षक परीक्षामा पनि ८० प्रतिशत भन्दा माथि अंक ल्याउने मात्र शिक्षक हुन पाउँने नियम बनाउनुस न बल्ल पो सार्वजनिक शिक्षामा सुधार होला नीति बनाउने बेलामा कन्जुस्याईं गर्नुहुन्छ, तलब राम्रो दिएर शिक्षकमा आकर्षक गर्नुस न नीति बनाउँदा शिक्षक पेशा बिकर्षण पार्नुहुन्छ कसरी सुधार गर्नुहुन्छ त ?